Development Network for Immigrants ─ မိမိ၏သားသမီးကို
Updated : 2016/8/3 上午 11:47:00
၂. အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခံရသူ : အသိအမှတ်ပြုမွေးစားသူ လျှောက်တင်ခြင်းမပြုသောအခါ မွေးစားခံရသူကို လျှောက်တင်သူအဖြစ်။
၃. အကျိုးသက်ဆိုင်သူ (အထက်ပါ ၁.၊ ၂. လျှောက်တင်သူမရှိသောအခါ)
၄. လွှဲအပ်ခံရသူ : မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်ရှိပြီး အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
၁. သာမှန်အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခြင်း : မိဘအရင်းမှကူညီထုတ်ဖော်သော အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခြင်းသဘောတူစာရွက်စာတမ်း။
အကယ်၍ ဖခင်အရင်းတစ်ဦးတည်းသာ အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခြင်းစာရွက်စာတမ်းဖြင့် မွေးစားစာရင်းသွင်းလိုသော် စစ်ဆေးခံသူ၏အရှေ့မျက်နှာဓာတ်ပုံကပ်ထားပြီး တံဆိပ်ထုထားသောမျိုးရိုးစစ်ကြောင်းသက်သေစာရွက်စာတမ်းပြရန်လိုအပ်သည်။
၂. တရားစီရင်ချက်အရ အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခြင်း : တရားရုံးမှအစီရင်ခံစာနှင့် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်လက်မှတ်။
၃. ပြုစုပျိုးထောင်ရန် အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခြင်း : ဖခင်အရင်း၏ပြုစုပျိုးထောင်ရန်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း။
၄. အသိအမှတ်ပြုမွေးစားသူ၏တံဆိပ်တုံး (သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုး)၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နှင့် အသိအမှတ်ပြုမွေးစားခံသူ၏ သန်းခေါင်စာရင်း၊ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ယူဆောင်ပြီးသူသည် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ပြောင်းယူရန်လိုအပ်သည်။
(သတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကို အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် http://www.ris.gov.tw/187 )။
၅. အသိအမှတ်ပြုမွေးစားရန်လျှောက်တင်ခြင်းနှင့်အတူ ဖခင်အမည်လိုက်လိုပါက သားသမီးအမည်လိုက်ကတိပြုစာရွက်စာတမ်းပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၆. လွှဲအပ်လုပ်ဆောင်လျှင် လွှဲအပ်စာရွက်စာတမ်းနှင့် လွှဲအပ်ခံရသူ၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုး (သို့မဟုတ် တံဆိပ်တုံး) ပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၇. နိုင်ငံခြားတွင်လုပ်ဆောင်သောစာရွက်စာတမ်းများကို နိုင်ငံခြားရှိအာအိုစီသံရုံး၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၊ ၀န်ဆောင်ရုံး သို့မဟုတ် အခြားသောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အာဏာပေးထားသောအာဏာပိုင်မှ စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ တရုတ်ပြည်မတွင်လုပ်ဆောင်သောစာရွက်စာတမ်းများသည် ရေလက်ကြားဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှစစ်ဆေးအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းများသည် နိုင်ငံခြားသံရုံး သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းသက်သေခံမှအတည်ပြုသော တရုတ်ဘာသာပြန်လိုအပ်သည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : တပြည်လုံးရှိ